Fahrettin Koca: 32.000 A ga - eweghachi ndị ọrụ ahụike | RayHaber | raillynews
HomeGeneralOGBU NIILEcoronavirusFahrettin Koca: A ga-ewegara ndị ọrụ ahụike 32.000 ọrụ
Fahrettin Koca: A ga-ewegara ndị ọrụ ahụike 32.000 ọrụ
23 / 03 / 2020 coronavirus, OGBU NIILE
Turkey Minister nke Health - Dr. Fahrettin Koca
Dabere na nkwupụta nke Minista Ahụike Fahrettin Koca na mgbasa ozi dị taa, a ga-ahọpụta ndị ọrụ ahụike 32.000 ngwa ngwa iji hụ na ọgụ dị mma na coronavirus.
Onye Minista Ahụike Fahrettin Koca: “Anyị na-agba mbọ imeziwanye ego ndị ọrụ nlekọta ahụike. Anyị na-agụnye ndị ọrụ 32. N'ime usoro a, anyị ga-akwụ ụgwọ ndị ọzọ na-arụ ọrụ ahụike na-arụ ọrụ na ntanetị 20 pasent. N’oge ọgbaghara dara, anyị maara na enwere ụlọ ọrụ na-anwa irigbu ya, ma a na-ebuso agha n’ụlọ nkwakọba ihe nke ndị na-emepụta na ndị na-ere. A hụrụ nchekwa dị omimi. Ruo taa, anyị malitere ịme nkwekọrịta site na ịkpọ ụlọ ọrụ niile otu otu. Ka ọ dị ugbu a, anyị na ụlọ ọrụ XNUMX ekwenyewo. ”
Kedu A ga-azụta Ogbe Ndị Ahịa
A ga-ekpughe ajụjụ ndị ga - eme na ọnọdụ ndị a ga - eme maka iwere ndị ọrụ ahụike mmadụ 32.000 ka ndị ọrụ nlekọta ahụike tinye n'ọrụ na ụbọchị na - abịa.
Fahrettin Koca kwupụtara na ịnabata ndị ọrụ a ga-ebuga na Ministry of Health ga-eme n'ime otu izu, na ndị ọrụ nlekọta ahụike nwekwara ike iji ụlọ ndị ọbịa steeti.
Nkwado ndị ọkachamara si China maka Coronary War
Dabere na nkwupụta nke Minista Koca, a ga-enweta nkwado dị anya site n'aka ndị dọkịta China. N’ikwu na ọ ga-adị mfe ịlụso coronavirus ọgụ, na-ekele ndị dọkịta nwere ahụ ọfụma, ndị ga na-akwado ime ime obodo mgbe niile, minista ahụ kwupụtakwara na a na-ekesa ngwa nchọpụta ọrịa ngwa ngwa n'ụlọ ọgwụ anyị.
Ozi nkowa mgbakwunye Health Health Shaq for the Coronavirus War
A ga- eweghachi ndị ọrụ ahụike ruru puku 18.000 ka ọ bụrụ ebe healthSYM ga-eme ya dị ka akara KPSS ga-arụ ọrụ na ngalaba ọrụ nke ngalaba ọgbakọ anyị.
1.600 n'ime ha bụ ụmụ nwanyị na-ele ime,
Mpempe akwụkwọ 14.000 na-arụ ọrụ na-adịgide adịgide (ọrụ nhicha, nchebe na ọrụ nchekwa, yana ndị ọrụ nkwado ụlọ ọgwụ)
ọkà n'akparamàgwà mmadụ,
Onye Ọrụ Ndị Ọrụ,
Oru Ochie na Oru Ogwu.
Okwu Nkwupụta na Asụsụ,
Ngwa n’abalị iri abụọ na isii n’ọnwa Machị
E bipụtasịrị Ntụgharị Mmasị na weebụsaịtị nke ÖSYM, ndị aga-aga ime ga-enwe ike ịme nhọrọ n'etiti Machị 26 na Eprel 1, 2020.
Maka ọkwa, soro ntuziaka Director of Health Services nke Health Services na webụsaịtị ÖSYM.
Fahrettin Koca: Ndị Ọkachamara Ahụike Ahụike Ga-enweta Ntinye Aka Ọzọ Site na Ceiling!
Nkwupụta Obi Ụtọ: 3.000.000 Nkọwa ọnụ
Nkwupụta Obi Ụtọ: 3.000.000 Nkwado nkwekọrịta
Nkwuputala Obi Ụtọ: 2.000.000 Na-atụ egwu maka ịbịakọta nke 6 ụdị ụkwụ HM
Nkwuputa Obi Ụtọ: 3.000.000 Ịzụ ahịa Ụgwọ nke HM ụdị mmiri mwekota
Mara ọkwa Okike: A ga-azụta Ballast (30.000 M3 na Köprüağzı, Mamure…
Berat Albayrak: Enyefela Nkwupụta VAT na Oge ịkwụ ụgwọ